China Silver Copper Zinc Cadmium Solder Kugadzira uye Fekitori |Yuanfang
BAg20CuZnCd Iine 20% sirivheri, yakaderera kunyungudika, yakanaka fluidity, inotsvedzerera brazing joint, uye inogona braze mhangura nemhangura alloy, simbi nesimbi isina tsvina.Kuumbwa: Cu: 34 ~ 36, Ag:: 19 ~ 21, Zn: 29 ~ 33, CD: 14 ​​~ 16, Si: yakasara Solidus 620 ℃, liquidus 730 ℃.
Iyo ine 20% sirivheri, yakaderera kunyungudika, yakanaka fluidity, yakatsetseka brazing joint, uye inogona braze mhangura nemhangura alloy, simbi uye Stainless simbi.Kuumbwa: Cu: 34 ~ 36, Ag:: 19 ~ 21, Zn: 29 ~ 33, CD: 14 ​​~ 16, Si: yakasara Solidus 620 ℃, liquidus 730 ℃.
Iine 30% sirivheri, ine yakaderera kunyungudika, kunaka kunyorova, kuzadza majoini, kuyerera kwakanaka, yakatsetseka yebrazing joint, uye inogona braze mhangura nemhangura alloy, simbi nesimbi isina tsvina.Kuumbwa: Cu: 26 ~ 28, Ag:: 29 ~ 31, Zn: 21 ~ 25, CD: 19 ~ 21. Solidus 607 ℃, liquidus 710 ℃.
Iine 40% sirivheri uye ine nzvimbo yakaderera yekunyungudika pakati pevatengesi vesirivha.Inogona kushongedza mhangura nemhangura alloys, simbi uye simbi isina tsvina.Iyo inonyanya kukodzera kune dzimwe nguva dzine yakaderera brazing tembiricha.Kuumbwa: Cu: 15.5 ~ 16.5, Ag:: 39 ~ 41, Zn: 17.5 ~ 18.5, CD: 25.1 ~ 26.5.Solidus 595 ℃, liquidus 605 ℃.
R&d uye Dhizaini
1. Zvinotora nguva yakareba sei kuti kambani yako igadzirise mold?
2. Ko kambani yako inobhadharisa mari yekuumbwa?Zvingani?Inogona kudzorerwa here?Nzira yekudzosera mari?
Unganidza muripo we mold, uye uverenge muripo we mold zvinoenderana nezvinodiwa zvemadhirowa.Kana huwandu hwechigadzirwa chimwe chete hunopfuura zvidimbu zve1000, inogona kudzoserwa, uye inodzoserwa kubva kune inotevera batch yemirairo.
3. Kangani zvigadzirwa zvekambani yako zvinogadziridza?
4. Ndezvipi zvinhu zvikuru zvezvigadzirwa zvako?
Zvigadzirwa zvekukandira zvinosanganisira HT200, HT350, QT400-15, QT800-2, uye iyo huru yekushongedza zvinhu ndeyemhangura-yakavakirwa uye sirivha-yakavakirwa;chinhu chikuru chevhiri hub Q345B simbi;chinhu chikuru chealuminium pombi ndeye 1070.
5. Ko kambani yako inogona kusiyanisa zvigadzirwa zvako?
Chigadzirwa chine YuanFang logo
1 Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzinogamuchirwa dzekambani yako?'
Tsamba yechikwereti, wire transfer.
Zvakapfuura: Silver Copper Zinc Solder
Zvinotevera: Phosphor Copper Flat Bar
Mhangura-Aluminium Flux Cored Brazing Filler Metal